Kedu ihe kpatara azụmahịa ọ bụla eCommerce ji achọ ngwa ọrụ ọnụahịa dị omimi? | Martech Zone
Anyị niile maara na ịga nke ọma na oge ọhụụ nke azụmahịa dijitalụ na-adabere n'ọtụtụ ihe, yabụ itinye n'ọrụ ngwaọrụ dị oke mkpa.
Ọnụahịa na-aga n'ihu na-abụ ihe mmezi ọnọdụ mgbe ị na-eme mkpebi ịzụta. Otu n’ime nnukwu nsogbu chere eCommerce azụmaahịa n’oge a na-agbanwe ọnụahịa ha ka ọ daba n’ihe ndị ahịa ha na-achọ oge niile. Nke a na - eme ka ọnụ ahịa dị ọnụahịa dị oke mkpa maka ụlọ ahịa dị n'ịntanetị.
Dynamic ịnye ọnụahịa azum, na mgbakwunye na nke ụzọ dị irè iji nọgide na-enwe a asọmpi ọnụnọ na ahịa, -enyere anyị n'ịwa ahịa mmasị. Ọ bụ ya mere o ji dị mkpa ugbu a maka azụmaahịa ọ bụla eCommerce iji nwee ngwa ọnụ ahịa siri ike iji mepụta atụmatụ ọnụahịa ya dị mma.
Ndị dike nke azụmahịa na-eji ụdị nkà na ụzụ eme ihe ugbu a. Amazon nwere ike ịhụ nke a na Amazon, nke nwere ike ịgbanwe ọnụahịa nke ngwaahịa ya ọtụtụ narị ugboro n'ụbọchị. Algọridim nke Amazon na-eji bụ ihe omimi nye ndị na-ere ahịa na-agbasi mbọ ike ịgbaso usoro nke nnukwu ịntanetị a.
Ọnụahịa Amazon na-emetụta ngwaahịa ngwaahịa teknụzụ. N'ihi agha a na-akwụ ụgwọ mgbe niile, ngalaba a bụ otu n'ime mgbanwe kachasị agbanwe. Agbanyeghị, ọnụahịa mgbanwe na-eme n'ụdị ngwaahịa niile nke Amazon na-enye.
Kedu uru ndị dị na ịnwe atụmatụ ọnụahịa siri ike?
Ọ na - enye gị ohere ijikwa oke uru maka ngwaahịa ọ bụla oge niile iji jigide asọmpi n'ahịa.
Ọ na - ahapụ gị ka ị jiri ohere ahịa mee ihe. Ọ bụrụ na asọmpi ahụ agwụla, ọchịchọ a dị elu karịa na ọkọnọ ahụ dị ala. Nke a pụtara na ị nwere ike ịtọ ọnụahịa dị elu, nke ga-abawanye uru gị.
Ọ na - enyere gị aka ịnọgide na-asọmpi ma na-asọmpi nhata. Otu ihe atụ doro anya bụ Amazon, nke, kemgbe mmalite, ejirila usoro ọnụahịa ya dị ike na nke kachasị, nke bụ isi ihe na-enweghị mgbagha maka ihe ịga nke ọma ya. Ugbu a ị nwere ike nyochaa ọnụahịa Amazon ma chọpụta ihe atụmatụ ọnụahịa gị ga-abụ.
Ọ na - enye gị ohere ijide ọnụahịa gị, na - ezere ịnye ngwaahịa ndị dị ọnụ ahịa n'ahịa, nke nwere ike inye ndị ahịa gị ihe na - adịghị mma gbasara iwu ọnụahịa gị, na igbochi ha ka a ghọta ha dị ka oke ọnụ ma ọ bụ dị ọnụ ala.
Kedu ụdị teknụzụ na-enye anyị ohere itinye usoro a?
Ebumnuche ọnụego mgbanwe dị omimi chọrọ ngwa ọrụ iji mee ha, sọftụwia pụrụiche n’ịkpakọba data, hazie ya ma rụọ ọrụ ya na nzaghachi nye mgbanwe niile gunyere na algorithm.
Inwe ngwanrọ iji rụọ ọrụ ma rụọ ọrụ, dịka nyocha nke omume ndị ahịa na ọnụahịa nke ụlọ ọrụ ndị ọzọ na mpaghara ahụ na-eme ka o kwe omume ịme usoro mkpebi na yana ya, nweta nnukwu uru.
Ngwaọrụ ndị a na-adabere na data buru ibu iji nyochaa ọtụtụ mgbanwe dị iche iche nwere ike idozi ire ahịa n'oge. Dịka ngwa ọrụ ọnụahịa siri ike si Chebara echiche, nke na-enye gị ohere ịchọpụta ihe ọnụahịa kachasị mma maka ngwaahịa na ọrụ gị bụ oge niile site na nyocha nke ihe karịrị 20 KPI nwere ụdị ọgụgụ isi siri ike (AI). Onye ọ bụla na-ere ahịa na-enweta ozi ọ chọrọ site na asọmpi ya na ahịa ya. AI a nwekwara ikike mmụta igwe, na-eme ka o kwe omume mkpebi ndị emere n'oge gara aga na akaụntụ ugbu a. N'ụzọ dị otú a, a ga-eji nwayọọ nwayọọ nụchaa atụmatụ ọnụahịa ya mgbe ọ na-eduga n'uto azụmahịa.
Akpaaka bụ isi
Ọnụ ego dị omimi bụ usoro na - amalite nhazi usoro. Ọ bụ ezie na nke a bụ mmega ahụ enwere ike iji aka rụọ, mgbagwoju anya na obosara nke ihe ndị metụtara ya mere ka ọ ghara ikwe omume. Cheedị nwa oge ihe ọ ga-apụta iji nyochaa ngwaahịa ọ bụla na katalọgụ nke ndị ọ bụla na-asọmpi gị n'otu n'otu iji wepụ echiche ndị ga-achịkwa ọnụahịa maka ụlọ ahịa gị. Ọ dịghị adọrọ mmasị ma ọlị.
Ọ bụ n'oge mmejuputa atumatu usoro ọnụahịa dị egwu nke teknụzụ akpaaka na-arụ, na-eme ihe niile enwere ike. Ọ na-eme omume akọwapụtara site na atụmatụ ahụ dabere na mgbanwe ndị enyerela ma nyochaa. Ya mere, na nke ọ bụla, a na-enye azịza.
Eziokwu ahụ bụ na mmejuputa iwu ọnụahịa siri ike bụ, na nkenke, ihe akpaka na-egosi na enwere nnukwu nchekwa na ego mmadụ na oge. Nke a na-enye ndị ọrụ eCommerce na ndị nyocha aka ilekwasị anya na ọrụ ndị dị elu, dị ka ịmụ data, iwepụta nkwubi okwu, na ịme mkpebi kacha mma maka azụmaahịa ahụ.